अधुरो यात्रा (भाग ३) – पुरु's कर्नर
Home » Old Blog » अधुरो यात्रा (भाग ३)
अधुरो यात्रा (भाग ३)
By Purushottam Adhikari 04, 06, 2013
Statutory Directive : Smoking is injurious to health
भाग २ पढ्नुभयो? पढ्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।
व्याक्ग्राउन्डमा ब्राड पाइज्लीको “व्हिस्की लुलाबाई” बज्दैथियो । ऊ एकछिन रोकियो, साहेद अर्को एक क्वाटर मगाउन वेटर तिर इशारा गर्दैथियो । फेरि सुरु गर्यो उसको त्यो “अधुरो यात्रा” जुन आज पनि एक अमिट छाप बनेर उसको मन र मस्तिस्कमा सलबलाइरहेको थियो ।
फाइनल इयरको परीक्षा नजिकिदै थियो, परीक्षाको लागि मात्र २ हप्ता बाँकी थियो । सबै साथीहरु परिक्षाको तयारीमा व्यस्त थिए । छिरिंग बिदामा घर गएको थियो र म कोठामा एक्लै थिएँ । प्राय जसो परिक्षामा हामी सँगै तयारी गरिरहेका हुन्थ्यौं । यो पाली पनि स्थिति फरक थिएन । ऊ विहानै मेरो कोठामा आउथी र दिनभरी जसो हामी संयुक्त रुपमा पढाईमा केन्द्रित हुन्थ्यौँ । पढाईको साथसाथै हामी भविष्यको सुन्दर संसारको कल्पनामा डुबुल्की मार्दै हुन्थ्यौँ ।
ऊ भन्थी, “समिर, अब यो हाम्रो प्रेमलाई चाडै मुर्त रुप दिनुपर्छ, वि मस्ट गेट इन्गेज्ड सुन”
“अब हामी त्यो संबन्धबाट टाढा छैनौ सुलोचना” म उसलाई सम्झाउथें, “यो परिक्षा सकिन देउ, एउटा राम्रो ठाउमा जागिर पक्का होस, त्यसपछिको कुरा पछि सोचौला नि”
“ड्याडीममीले मान्नुभएन भने ?” ऊ शंका गर्थी ।
“हाम्रो प्रेम त्यति कमजोर छैन प्रिय, न त यो चैत मास को हावा हुरी ले उडाउन सक्छ न त साउने भेलले नै बगाउन सक्छ, यो त गंगाको पानी जस्तै पवित्र छ, हिमालको शिर जस्तै अटल छ ।” म अर्थ्याउने कोसिश गर्थेँ ।
यस्तै मिठा मिठा गफले त्यो समयमा हामीलाई उर्जा थपेको थियो । एउटा छुट्टै संसारमा रमाइरहेका थियौ हामी ।
भन्दाभन्दै परिक्षाको दिन पनि आयो । एक आपसमा बेस्ट अफ लक साट्यौं । उचित तयारी गरेकोले हामी दुबैलाई त्यस्तो गाह्रो भएन । हप्तादिनपछि परीक्षा सकियो । प्राक्टिकललाई अर्को एक हप्ता लाग्यो ।
पोस्ट एक्जाम पिरियड यत्तिकै पोखरामै बित्यो । म एउटा राम्रो आइ. टी. कम्पनी सँग लिंक बनाउने कोसिश गर्दैथिए । दुई महिनाको अन्तरालमा खासै अरु कुरामा प्रगति गर्न सकिएन । हामी दुई बिच पनि प्राय भेटघाट भैरहन्थ्यो ।
अन्तत रिजल्ट आयो, मैले फर्स्ट डिभिजनमा राम्रै अंकको साथ उतिर्ण गरेछु, उसले चाहिँ अलिक थोरै ल्याइछे । दुखेसो गर्दैथी, पछि फकाउन गाह्रो भएन ।
जसोतसो ब्याचलर पढाइ पनि सकियो । अब एउटा राम्रो ठाउँमा जागिर अनि सुलोचानासंगको घरवार र सुखी खुसी परिवार, मेरो जिन्दगीको उद्देश्य यीनै थियो । साहेद यो भन्दा बढी मैले कहिल्यै सोचिन पनि होला ।
के सुर चलेर हो, छिरिंगले कोठामा कान्तिपुर पत्रिका किनेर ल्याएको रहेछ । मैले थाहा पाएसम्म साहेद कुनै पनि शुक्रवारको साप्ताहिक चाहिँ किनेर ल्याउन छुटाउदैन थियो उसले ।
“आजभोलि कान्तिपुले पनि मिडल पेजमा ब्लो अप छाप्न थाल्यो र?” मैले जिस्कदै सोधें
म पनि खासै पत्रिका पढ्ने मान्छे त होइन, त्यहि पनि यसो पाना पल्टाउदै गएँ । राशिफल हेरें, काम बन्ने लेखिएको थियो । भर्खर एस. एल. सी. को रिजल्ट आएकोले होला, पत्रिकामा समाचार भन्दा पनि प्लस टु कलेजहरुको निकै भड्किला विज्ञापनहरुलको एकछत्र राज थियो । अन्तिम पृष्टमा एउटा चलेकै एन. जी. ओ. ले पोखरामा आफ्नो नयाँ शाखा खोल्न लागेकोले केहि कर्मचारीहरुको आवश्यकता रहेको विज्ञापन छापेको थियो । ढुंगा खोज्दा देउता मिलेझैँ भयो । सि. भी. रेडी थियो, म उतिन्खेरै सबै डकुमेन्ट लिएर एप्लाई गर्नको लागि हिडें ।
त्यसको ४ दिन पछि इन्टरभ्यू थियो, अन्तर्वार्ताको लागि महेन्द्रपुलमा रहेको उक्त अफिसको शाखा तिर हिडियो । लाइनमा बाहिर बसिरहदा एउटा टेक्स्ट आयो, “बेस्ट अफ लक डीयर, होप द डे विल एड माइलस्टोन टु आवर रिलेसनशिप” । “थ्यांक्स स्वीटहार्ट” अनि एउटा किसको स्माइलीले रीप्लाई गरिदिएँ । ऊ मेरो लक्की चार्म पनि थिइ, उसको त्यो म्यासेजले अलिक कन्फिडेन्स बढेजस्तो भयो । अन्तर्वार्ता सोचेभन्दा राम्रो भयो, मेरो एकेडेमिक्स पनि स्ट्रंग नै थियो, म राम्रो रिजल्ट आउनेमा विस्वस्त थिएँ ।
ठिक भोलिपल्ट दिउसो अपरिचित नंवरबाट कल आयो ।
“कंग्राचुलेसनस समिर जी, यू आर सेलेक्टेड फर द जव, भोलि बिहान १० बजे अफिसमा हाजिर हुनुहोला ।”
म खुसीले ३ हात माथि उफ्रिएँ । उत्तिनखेरै फोन गरें सुलोचानालाई, खुसीको खबर सुनाएँ, उसको बधाईले म थप हर्षित भएँ । साँचै जीवनमा केहि उपलब्धि गरेजस्तो लाग्यो, हुन पनि सुलोचना पछिको मेरो अर्को ठूलो उपलब्धि केहि थियो भने त्यो यहि नै थियो ।
भोलिपल्ट देखि म काममा जान थालें । नयाँ संस्था र अनुभवको अभावले म केहि अल्मलिएको थिएँ । मेरो काम त्यहाँ प्राय डाटाबेस इन्ट्री गर्ने, सर्भर मिलाउने र आइ. टी. रेखदेख गर्ने हुन्थ्यो । तर त्यहाँका मिलनसार कर्मचारीहरुले गर्दा काममा भिज्न त्यति समय लागेन । काम गर्ने वातावरण र इच्छाशक्ति हुनु पर्दो रहेछ, कति चाडो समय वितेको मलाई पत्तो भैरहेको थिएन ।
“बि नि क्याफे अरोमा एट फाइभ”, अफिसबाट छुट्टी हुनु एक घण्टा अगाडी मैले म्यासेज पाएँ । काममा जान थालेदेखि उसँग त्यति सारो भेट हुन सकिरहेको थिएन । ओ साँची, ऊ त भोलि काठमान्डौ जादैछे क्यारे, कस्तो भुसुक्कै बिर्सेको ।”
हामी दुबै ५ बजे क्याफे अरोमाको यहि टेवलमा थियौं । मैले कफि र सिग्रेट मगाएँ, उसले हट लेमन र स्प्रिंग रोल अर्डर गरी । नोभा ब्रान्डको पर्फ्युमको बास्ना उसको शरीरबाट आइरहेको थियो । २ दिन अघि मात्र हेयर कर्ली गरेकी उसलाई मैले त्यो रुपमा पहिलोपल्ट देखेको थिएँ । डार्क ब्याक्ग्राउन्डमा साइनिंग इम्ब्र्योडरी गरिएको फुल स्लीभ टीशर्टमा वास्तवमै ऊ क्युट अनि इनोसेन्ट देखिएकी थिइ । किन किन ऊ पहिलेभन्दा फरक देखिन्थी, कि त्यो मेरो दृस्टीभ्रम मात्र थियो ? मैले उसलाई यसरी नियालेर पहिले कहिल्यै हेरेको थिइन, के मेरी सुलोचना साँचै यति राम्री थिई ? मैले उसलाई एकतमासले यसरी हेरीरहें, मानौं अब उसलाई कहिल्यै हेर्न पाउँदिन । हो, साँचै त्यो मेरो अन्तिम हेराइ थियो, त्यसपछि मैले उसलाई कहिल्यै त्यसरी हेर्न पाइन ।
“कहिले फर्कन्छौ तिमी?” मैले औपचारिकता पुरा गरें ।
“१ हप्ता पछि । ड्याडी पनि त्यसको लगत्तै आउनुहुन्छ, साहेद तिमीलाई हाम्रो बारेमा कुरा गर्न बोलाउनुहुन्छ होला ।”
“के ल्याइदिन्छौ त मलाई उताबाट?”
“देर विल बि अ सर्प्राईजिंग गिफ्ट फर यू, वेट टिल देन” उसले मुस्कुराउदै भनी ।
मैले कुरीरहें तर त्यो दिन कहिल्यै आएन ।
“ओ सेट !!! आज त सुलोचनाको बर्थडे पो हो त, अनि ऊ काठमान्डौबाट फर्कने दिन पनि हो आज । कसो भुसुक्क निदाइरहिएनछ ।” साँढे पाँच बजे एम्बुलेन्सको साइरनले मेरो निन्द्रा खुल्यो । मोबाइल लिएर फोन गर्न लागें । ज्या मोबाइलको ब्यालेन्स त शुन्य पो रहेछ । मुख पनि नाधोइकन हतार हतार गरी तल पसलबाट कार्ड किनेर रिचार्ज गरें ।
परेवाको एक जोडी नजिकै विजुलीको पोलमा चिरविर गर्दै खेलीरहेका थिए । एक्कासी भ्याटभ्याट आवाज आयो, करेन्ट सर्ट भएछ क्यारे, पोथी परेवा उछिट्टीएर पर बाटोमा लडी, भाले परेवा क्वार् क्वार् रुन लाग्यो । तैट कस्तो दृश्य देख्नुपरो एकाबिहानै, मन खिन्न बनाउदै कोठामा उक्लिएँ ।
“ह्यापी बर्थडे टु यू, ह्यापी बर्थडे टु यू डीयर सुलोचना, ह्यापी बर्थडे टु यू” मैले फोनबाटै विस गरें ।
“ह्याव नाइस जर्नी, सी यू एट लेकसाइड इन इभिनिंग”
उसले बिहान १० बजेको माइक्रो चड्ने र बेलुका लेकसाइडमा भेट्ने कन्फर्म गर्दै फोन राखी ।
कति छिटो काम गर्न थालेको पनि १ महिना भइसकेछ । आज म मेरो मेहिनेत र परिश्रमको पहिलो स्यालरी बुझ्दैछु । सुलोचनाको बर्थडे पनि आजै । ऊ सँग १ हप्ता पछि भेट हुदैछ, किन किन आज विशेष दिन लागिरहेछ । खासै काम पनि थिएन अफिसमा, चाडै छुट्टी लिएँ । पोखरा व्यकरीबाट केक अर्डर गरें अनि अर्किड रेस्टुरेन्ट एण्ड बार मा एक टेवल रिजर्भ गरेर बेलुकाको लागि सबै तारतम्य मिलाएँ ।
भर्खर दिउसोको २ बजेको थियो, कोठामा फर्कें । मुख सुकिरहेको थियो, दुई गिलास पानी रित्याएं । छाती चसक्क चस्क्यो, सिसाको गिलास भूइमा खस्यो अनि झर्याम्म फुट्यो, उफ गिलास खसेको नि भेउ पाएनछु । धन्न धेरै टुक्रा भएनछ, जसोतसो उठाएर पोको पारें ।
सुलोचनाको फोन पनि लागिरहेको थिएन, यो हाइवेमा हिडेको बेलामा फोन लगाउनु पनि सानोतिनो युद्ध जितेझैं हुन्छ । बत्ती आइरहेको रहेछ, के सुर चलेर टिभी हेर्न मन लाग्यो । टीभी खोलेर हेर्दा छाँगोबाट खसेझै भएँ । काठमान्डौबाट पोखरा आउदै गरेको माइक्रोबस मुग्लिन नजिकै दुर्घटना भएर त्रिशुली नदीमा खसेको फ्ल्यास न्युज सबै च्यानलहरुले देखाइरहेको थिए । कतै त्यो गाडी सुलोचना चढेकै त थिएन? ओठमुख सुकेर सुख्खा भयो । फनन्न एक फन्को घुमायो । एकैछिनमा समाचार आयो, दुर्घटनामा मृत्यु भएका यात्रुहरुको नाम भन्न थाल्यो, आखिरमा जे नहुनु थियो त्यहि भयो । हो, सुलोचना अब यस संसारमा रहिन, त्रिशुलीको भेलसँगै ऊ पनि बगीरही, टाढा धेरै टाढा कहिल्यै नफर्कने गरी ।
म यति रोएँ, यति रोएँ अब रुनको लागि आशु बाँकि रहेन । मेरा आँखा त रित्तिसके तर पनि आशुले आँखाबाट त्यो उसको आकृति पखाल्न सकेन । ऊ आफु त सदाको लागि टाढा भई तर उसँगका ति स्मृतिहरूका नगन्य पलहरु मेरै पासमा छोडेर गई । मलाई कहिल्यै वसन्त नआउने गरी शिशिरमा उजाडिएको नाङ्गो पाखो बनाएर गई, न म नयाँ बहारले फुल्न नै सकें, न त ओइलाएर झर्न नै सकें………….
हो नयाँ बर्ष आएको छ… | Purushottam Adhikari says:
15th April 2013 at 2:41 pm
[…] अघिल्लो ब्लग पढ्नुहोस : अधुरो यात्रा ( भाग ३ ) […]